Mgbasa ozi na ịlaghachi na ntinye ego | Martech Zone
Onye ọsụ ụzọ ahịa John Wannamaker otu ugboro kwuru, sị, “Ọkara ego m na-emefu n'ịgbasa ozi lara n'iyi… Nsogbu a bụ, Amaghị m nke ọkara.” Ruo taa, ọtụtụ ndị na-ere ahịa amaghị nke ọwa mgbasa ozi ha dịkarịrị mma. Ntinye ego na ntanetị abawanyela n'ihi ikike ka mma iji soro ihe ịga nke ọma, mana ọwa na-anọghị n'ịntanetị ga-aga n'ihu na-achịkwa mmefu maka ọdịnihu.
Ifbyphone, onye isi na akụrụngwa ahịa nke olu, achikota ihe omuma ihe banyere onu ogugu ahia ahia iji nyere ndi ahia aka imeri nsogbu a ka ha na-amalite ime atụmatụ 2012.
Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa na-eji oge dị ukwuu elele nloghachi na ntinye ego, ekwenyeghị m na itinye n'ọrụ nke ọ bụla ga-atụle onwe ha. Otu ihe atụ bụ obere oge na nsonaazụ dị ogologo. Ahụmahụ anyị bụ na mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa nwere ike nweta ọtụtụ nduzi ndị ruru eru karị ngwa ngwa megidere mgbasa ozi mgbasa ozi, nke na-ewe oge iji wuo ihe na-eso na ikike dị mkpa iji mee ka ndị na-eso ụzọ bụrụ ndị ahịa.